सक्षम सरकारी अस्पताल र उपचारार्थ बिरामीको अपेक्षा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सक्षम सरकारी अस्पताल र उपचारार्थ बिरामीको अपेक्षा
२०७१ पुष १८, शुक्रबार ०३:२७ गते
देशैभर यतिबेला सबैभन्दा ठूलो बेथिति स्वास्थ्य र शिक्षामा छ, भन्छन् विज्ञहरु । हुन त, तिनै विज्ञहरुमध्येकै कतिपय शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा पनि रहेका छन् । जानेकैले देशका विभिन्न क्षेत्रहरु डामिरहेका छन् । उनीहरुकै कारण दैनिक जीवनसं“ग जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षामा हामी नेपालीहरुले निकै ठूलो धनराशि खर्च गर्नु परिरहेको छ । एकातिर सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ, अर्कोतर्पm यी दुवै क्षेत्रमा जनताको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । शासकहरुले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य र शिक्षा तत्काल निःशुल्क गर्न नसके पनि केही सस्तो, सरल र सहज भने बनाउन पक्कै सकिन्छ । यसैको परिकल्पना हुन्, नेपालका सरकारी अस्पताल ।
धेरैजसो सरकारी अस्पतालहरुले पनि सरकारको लगानी भनेर त्यति चासो दिएको पाइन्न । सरकारी अस्पतालमा ३० रूपैयाँमा हुने डाक्टरसं“गको भेट निजीमा पुग्दा ४ सयभन्दा माथि जान्छ, अन्य जा“चहरुको त कुरै नगरौँ । हजारभन्दा माथि नबोकी कुनै बिरामी अस्पताल छिरेमा उपचार होइन, उल्टै हप्काइ खाएर फर्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ । हामीले सुन्ने गरेका छौँ, एम्बुलेन्समा बिरामी बोक्दा नै लैनो कि बकेर्नो भनिन्छ बिरामीलाई । भन्नेहरुकै भाषामा भन्दा लैनो भनेको पैसा, सम्पत्ति भएको र बकेर्नो भनेको कमजोर आर्थिक स्थिति भएको हो । अनि, त्यसकै आधारमा बिरामीलाई दुहिन्छ, अर्थात् जा“च सुरू गरिन्छ । यस्तो छ हाम्रो निकटका निजी अस्पतालहरुको अवस्था । त्यसैले पनि सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्दै संस्थागत गरी बिरामीलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पनि यसैबाट पाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । यस्तैमा, आज मैले भरतपुरको एकमात्र सरकारी अस्पतालको स्थापना, सेवा, उपचार आदिका विषयमा चर्चा गर्दैछु ।
चितवनमा राप्ती दूनको विकासस“गै बस्ती बस्नेक्रम तीव्र रुपले अगाडि बढ्यो । सो समयमा यो भेग जंगल र झाडीले भरिएको अनि सोका कारण औलो र अन्य रोगहरुको समेत बिगबिगी भएकाले तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै २०१३ सालमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । काठको टहरामा हेल्थपोस्टको स्थापना गरिएकोमा त्यहा“ एक जना मेडिकल अधिकृतमात्रै थिए । सो हेल्थपोस्ट २०२० सालमा अस्पतालमा परिणत भएको हो । २५ शैया क्षमताबाट विधिवत् सेवा प्रारम्भ गरेको एकमात्र सरकारी अस्पतालको नाम सुरूमा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय राखिएको थियो । यो अस्पतालको तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए । हाल यो अस्पताल भरतपुर अस्पतालको नामले परिचित छ ।
नेपालको मध्यभागमा पर्ने चितवन जिल्लामा अन्य जिल्लाहरुबाट विभिन्न पेसा, व्यवसाय, अध्ययन, अध्यापन बसाइसराइँ आदिको कारणले आउनेक्रम निरन्तर जारी रहेकाले जनसंख्या क्रमिक वृद्धि भइरहेको छ । क्रमिक जनसंख्या वृद्धिस“गै धेरैजसो छिमेकी जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु स्थापना भइनसकेका कारण पनि करिब ३५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या यस अस्पतालको सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेको छ । २०२० सालमा २५ शैया, २०४० सालमा ५० शैया, २०५० सालमा १०० शैया, २०६१ सालमा १ सय ५० शैया र २०६७ सालमा ३ सय शैया विस्तार भएको हो । हाल भरतपुर अस्पतालमा ४ सय १५ शैया रहेका छन् । क्रमिक रुपमा यस अस्पतालले आफ्नो सेवा दिने क्षमतामा वृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । यस अस्पतालको लक्ष एक हजार शैया रहेको छ । तर, भरतपुरको केन्द्रमै रहेको यस अस्पतालका लागि स्थापना कालमा करिब ३२ बिगाहा जग्गा छुट्टाइए पनि अन्य विभिन्न संस्थालाई दिइएका कारण हाल करिब १० बिगाहा जग्गामात्रै अस्पतालले भोगचलन गरिरहेको छ । भरतपुर अस्पतालको जग्गा भोगचलन गर्नेहरुमा पुरानो मेडिकल कलेजले ६ बिगाह १९ कठ्ठा, सिटिईभिटीले ६ बिगाह १९ कठ्ठा १० धुर, भरतपुर आ“खा अस्पतालले करिब ४ कठ्ठा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर, रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रले २ कठ्ठा १० धुर, साझा स्वास्थ्य सेवाले १ कठ्ठा १० धुर जग्गा ओगटिरहेका छन् । अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी बृहत्तर शिक्षण अस्पतालसम्म पुग्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान गुरूयोजनाले तर्जुमा गरेका भवनहरुसमेत अपर्याप्त हुन जाने हु“दा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि थप जग्गाको आवश्यकता अनिवार्य सर्त हो । भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको ३० बिगाह ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा पूर्ण रुपमा फर्काउनका लागि अस्पताल विकास समिति लागिपरेको समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीको भनाइ छ ।
अस्पतालको सेवा दिने क्षेत्र निकै साँघुरो भएको र अस्तव्यस्त अवस्था बन्न थालेपछि केही वर्षपहिले तयार पारेको गुरूयोजनाअनुसार अहिले निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म पनि शव राख्ने व्यवस्थित घर छैन । यथेष्ट पार्किङ नहु“दा बिरामीका आफन्तहरुले बाहिर सडकमै साधन राख्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी भएर हतारहतार अस्पताल आएका बिरामी र आफन्तहरु साधन पार्किङ गर्ने स्थान खोज्ने र पैसा बुझाउने लठारोमा पर्छन् । गुरूयोजनामा यथेष्ट पार्किङ पनि उल्लेख छ । अस्पतालको गुरूयोजनाअनुसार काम सम्पन्न भएमा मुख्य भवनहरुको संख्यामात्रै ५ पुग्नेछ । सोअनुसार तीनवटा ब्लकमा छुट्टाछुट्टै भवनहरु बन्नेछन् । बी ब्लकको दुई तलाको काम सम्पन्न भएर सो स्थानमा प्रसूति तथा बालबालिकाको जा“च कक्ष सञ्चालन गरिएको छ भने बीच भागमा सबभन्दा अग्लो भवन ए ब्लकको दोस्रो तलासम्मको काम सकिए पनि हाल भुइँ तलामात्रै सञ्चालनमा छ । सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने ५ करोड रूपैया“ भुक्तानी नपाएकाले ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण बनिसकेको भवनबाट समेत काम लिन नपाइरहेको अवस्था रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. केशवराज भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । भुइँतलामा विशिष्ट प्रकारका क्याविन सुविधासहितका सेवा सञ्चालनमा छन् । यहा“ १ सय २३ बेड राखिएको छ । यी तीनवटै भवनमा आवश्यकताअनुसार थप २ तला निर्माण गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएका छन् । यी सबै नयाँ भवनहरु बनिसक्दा हाल देखिएका टिनका छाना भएका घरहरु पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । तब अस्पतालको बीच भागमा ग्रीनपार्क बन्नेछ । गुरूयोजनाअनुसार काम भएमा भरतपुर अस्पताल उपचारमा मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधारमै पनि नेपालकै नमुना अस्पताल बन्ने निश्चित भएको अस्पतालका पुराना कर्मचारी रूमाकान्त भण्डारीको बुझाइ छ ।
भरतपुर अस्पतालले रोग निदान र उपचारको क्षेत्रमा नियमित कामका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालभन्दा फरक आइसीयू सेवा सञ्चालन गरेको छ । सात शैयाको आइसीयू सञ्चालन भएको यस अस्पतालमा यो सेवा निकै फलदायी देखिएको छ । खासगरी, विभिन्न प्रकारका शल्यक्रिया, ल्याव परीक्षण, स्पाइनल सर्जरीका लागि यहा“ बिरामीहरु ठूलो संख्यामा आउने गरेका छन् । यहीँ आएर उपचार पाएका दुई जनाले सेवासमेत गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । यो अस्पतालमा दैनिक ४० भन्दा बढी बच्चाले जन्म लिने गरेका छन् । यसबाट सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । गएको वर्षमा मात्रै ११ हजारले यस अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिएका छन् । तीमध्ये २ हजारको मात्रै शल्यक्रिया गरिएको चिकित्सक सुनिलमणि पोख्रेलले बताउनुभयो । एक अध्ययनका अनुसार निजी अस्पतालहरुमा ६० देखि ९० प्रतिशत गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ, तर भरतपुर अस्पतालहरुमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै गरिएको छ । यो पनि अस्पतालको सुन्दर पक्ष हो ।
त्यस्तै, सर्पदंशका बिरामीको उपचार गर्ने मध्य क्षेत्रकै भरतपुर अस्पतालमात्रै एक्लो अस्पताल हो । तर, केही समयपहिले एन्टी स्नेक भेनम नभएको भन्दै बिरामी फकाइदिएपछि मृत्यु भएको घटनाले अस्पताल विवादमा पनि आएको थियो । उपभोक्ता अधिकार मञ्चले अस्पताल र चिकित्सकहरुलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा क्षतिपूर्ति समितिले निर्णय गरिसकेको छ । मृतकका परिवारले २ लाख क्षतिपूर्तिसमेत पाउने भएका छन् । यस कारण, अब यो रोग पुनः यस अस्पतालमा नदोहोरिएला भन्ने विश्वास छ । यसबाहेक, विभिन्न तालिम तथा परामर्श सेवा जस्तै एचआईभी, यौनरोग आदिको सेवा पनि अस्पतालमा सहज रुपमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस अस्पतालले दुई वर्षअगाडिदेखि नर्सिङ कलेजको सुरूवातसमेत गरेको छ । हाल दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन विजय पौडेलको नेतृत्वमा भरतपुर एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेसका लागि कार्यदल बनेको र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसं“ग छलफल चलिरहेकाले पौषभित्रै यसबारेमा निष्कर्षमा पुगिसक्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । यसरी एकातिर स्वास्थ्य सेवा र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य शिक्षा दुवै हाँगोमा भरतपुर अस्पताल उकालो चढ्दै गरेको भान सबैलाई भएकै हुनुपर्छ ।
यो संस्था सफल भएमा जनताका छोराछोरीले अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुमा तिरिरहेको ४५ देखि ६० लाखसम्म रकमको आधैमा चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न पाउने छन् । उपचारका क्रममा पनि निजीको भन्दा एक तिहाईमात्रै रकम खर्च गरे यस संस्थामा ठूला रोगको उपचार र शल्यक्रियासमेत हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, डा. माणिकलाल मानन्धरको नेतृत्वमा अस्पताल सुधार तथा संरचनागत सुधार समिति गठन गरिएको छ । यी दुवै समितिले काम सम्पन्न गरेर सोहीअनुसार अस्पताल अगाडि बढ्ने हो भने भरतपुर अस्पताल देशकै शान बन्न सक्छ । अस्पतालका मेसु डा. केशवराज भुर्तेलका अनुसार रणनीतिक विकास योजना बनाएर आगामी केही वर्षभित्रै स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा यस संस्थालाई सँगै लैजाने योजना अस्पतालले बनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएता पनि राज्यका तर्फबाट सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैया क्षमतामा विस्तार, दक्ष जनशक्ति तथा रोग निदान र उपचारमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक औजार उपकरणहरुको पर्याप्त व्यवस्था सरकारले मिलाउन सकिरहेको छैन । यस मानेमा पनि भरतपुर केही अगाडि नै छ । स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणका लागि अत्यावश्यक सेवा भएकाले आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको समेत पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाउन राज्यको ठोस कार्यक्रम हुन जरूरी छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइएको सेवा र स्वास्थ्यकर्मीहरु व्यावसायिकभन्दा व्यापारी बढी भए भन्ने जनगुनासो र आलोचना पनि हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता जनगुनासो र आलोचनाप्रति सरोकारवाला संस्था वा व्यक्तिले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
केही दिनअगाडि यस अस्पतालको अवलोकन गरेका स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले पनि भरतपुर अस्पताल अन्यन्त्रको भन्दा राम्रो भएको, पारदर्शितामा बाहिरै देखिने गरी दाग नलागेको र भौतिक पूर्वाधार गुरूयोजनाअनुसार नै बनिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । उनले तुलनात्मक रुपमा भरतपुर अस्पताल सुधार उन्मुख भएको भन्दै नमुना बनाउने पासासमेत फ्याँकेका छन् ।
बिरामीले सरकारी अस्पतालबाट ठूलो आशा गरेका पनि हुँदैनन् । यतिमात्रै हो कि यसअघिका मेसु र अध्यक्षका बीचमा हुने गरेका जस्तै खुल्लमखुल्ला जुहारी चलेर अस्पताल धराशायी नबनोस् । राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र नहोस् । विपन्न बिरामीले उपचार नपाएको सुन्न नपरोस् । चिकित्सकले राम्रोसँग जाँच गरेनन्, नर्सले हकारिन् भनेर बिरामीले कहिल्यै गुनासो नगरुन् । एक पत्रकार भेटघाटमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीले भनेझैँ “सफा, सुन्दर, गुणस्तरीय सेवा दिने बिरामीमैत्री” अस्पताल बनोस् । मेसु भुर्तेलले भनेझैँ “सरकारी त हो नि भन्ने अब हुँदैन ।” यो कुरा आगामी दिनमा झन्झन् सत्य सावित हुँदै जाओस् ।